Loan Deferral Program - Yoma Bank
ချေးငွေ ဆိုင်းငံ့အစီအစဉ် လျှောက်ထားမှုကို ဇွန်လ (၃၀) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားလက်ခံသွားမည်
ဧပြီလ ၁ ရက်မှ စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည့် ရိုးမဘဏ်၏ ချေးငွေအရင်း/အတိုးပြန်ဆပ်မှု ဆိုင်းငံ့ပေးသည့် အစီအစဉ် လျှောက်ထားသည့် ရိုးမဘဏ် Customer တစ်ယောက်ချင်းစီကို သေချာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကာ အတည်ပြုပေးခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ယခု ချေးငွေးအရင်း အတိုးပြန်ဆပ်မှု ဆိုင်းငံ့ပေးမည့် အစီအစဉ်အတွက် အသစ် လျှောက်ထားမှု များကို ဇွန်လ (၃၀) ရက်နေ့ထိ နောက်ဆုံးထား လက်ခံပေးသွားမည့်ဖြစ်ကြောင်း Customer များအား အသိပေးလိုပါသည်။ ဆိုင်းငံ့အစီအစဉ် ရယူထားပြီးဖြစ်သည့် customers များအနေဖြင့်မူ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နောက်ပိုင်းတွင် ချေးငွေဆိုင်းငံ့အစီအစဉ်အတွက် သက်တမ်းတိုးလိုပါက နီးစပ်ရာဘဏ်ခွဲတွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် သက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်သည့် ရိုးမဘဏ် Customer များအတွက် ချေးငွေအရင်းပြန်ဆပ်မှု ဆိုင်းငံ့ပေးမည့် အစီအစဉ်
ရိုးမဘဏ်သည် ကျင့်ဝတ်မှန်ကန်ရိုးမဘဏ် ဟူသည့် ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် စိန်ခေါ်မှုတွေကြုံလာနိုင်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ချေးငွေအရင်းပြန်ဆပ်မှု ဆိုင်းငံ့ပေးမည့် အစီအစဉ်ကတစ်ဆင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာကူညီမှုများဆောင်ရွက်ပေး လျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်မှာ ချေးငွေပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် လစဉ်အရစ်ကျ ချေးငွေအရင်း ပြန်လည်ပေးဆပ် ရမည့် ငွေကို ခြောက်လအထိ ဆိုင်းငံ့ရပ်ဆိုင်းပေးထားမည့် သဘောတူညီချက် ဖြစ်ပါသည်။
ချေးငွေပုံစံပြောင်းလဲခြင်းကို လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တစ်ဦးချင်း Customer များ အားလုံး လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ချေးငွေဆိုင်းငံ့မှုအစီအစဉ်သည် စိန်ခေါ်မှုများ များပြားနေသည့် ယခုကာလတွင် လုပ်ငန်းများ အထူးသဖြင့် အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများနှင့် မိသားစုများ၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ငွေကြေးအခက်အခဲများကို ကူညီဖြေလျှော့ပေးရန် ရည်ရွယ်ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှစတင်ကာ ဇွန်လ (၃၀) ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားလက်ခံပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
*သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များ အကျုံးဝင်ပါသည်။
ယခုအစီအစဉ်အတွက် စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်အပြည့်အစုံကိုသိရှိရန် ဤနေရာတွင် နှိပ်ပါ။
Principal Loan Repayments Deferral Programme to Yoma Bank customers affected by COVID-19
In the spirit of the Responsible Bank, we are providing financial assistance through our financial relief programme to businesses that may be facing challenges affected by COVID-19. The Financial relief programme will be via moratorium that allows Yoma Bank customers to defer loan repayment up to six months for monthly instalment payments, or the restructuring of loans and financing.
The restructuring treatment is available to Businesses as well as Personal customers. The programme was introduced on 1st April 2020 and the application was open until 30th June 2020, to help ease the financial burden of businesses particularly SMEs and households during this challenging period.
Please click here to see terms and conditions of the program.
ချေးငွေပြန်လည်ပေးဆပ်မှု ဆိုင်းငံ့ခြင်းအစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ
၁။ ချေးငွေ ပြန်လည်ပေးဆပ်မှု ဆိုင်းငံ့ခြင်းအစီအစဉ်ဆိုတာဘာလဲ။
ဒါကတော့ ဘဏ်ကို ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည့် ချေးငွေအရင်း နှင့်/သို့ အတိုးပေးဆပ်မှုအတွက် ငွေပေးချေမှုတို့ကို သတ်မှတ်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း ယာယီ ဆိုင်းငံ့ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးမဘဏ်ရဲ့ ချေးငွေရယူထားတဲ့ တစ်ဦးချင်းနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Customer တွေအနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိမယ်ဆိုရင် အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း ချေးငွေအရင်း/အတိုး၊ နောက်ကျကြေးနဲ့ တခြားဝန်ဆောင်ခတွေကို ပေးဆောင်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။
အတိုးကိုပါ ဆိုင်းငံ့ထားတယ်ဆိုရင် အဲဒီအတိုးဟာ ဆိုင်းငံ့ကာလအတွင်းမှာ အရင်းထဲကို ထပ်မံပေါင်းထည့်ထားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်းငံ့ကာလပြီးရင် ဖြစ်လာမည့် အတိုးအသစ်ဟာ ဆိုင်းငံ့ထားချိန် အရင်းနှင့်တကွ အတိုးပေါ်ကိုပါ ထည့်တွက်သွားတာမျိုးပါ။ ဒီလိုမျိုး ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုပုံစံမျိုးက customers များအတွက် ပိုမိုကုန်ကျစေမှာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် ဆိုင်းငံ့ရမယ်ဆိုရင်တောင် အတိုးပေါ်အတိုး မတက်သွားတဲ့ အရင်းကိုပဲ ဆိုင်းငံ့ဖို့ အကြံပေးလိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း မတတ်သာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့ အတိုးကော အရင်းပါ ဆိုင်းငံ့ထားပေးဖို့ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ချေးငွေဆိုင်းငံ့ကာလအပြီးမှာတော့ ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက်ပြီး ချေးငွေပြန်လည်ပေးဆပ်ရပါမယ်။
၂။ ရိုးမဘဏ်က ဘာကြောင့် ဒီအစီအစဉ်ကို ဆောင်ရွက်ရတာပါလဲ။
COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် လူတိုင်း အခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့နေရတာကို ကျွန်တော်တို့ နားလည်သဘောပေါက်ပါတယ်။ ယခုလို ခက်ခဲတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ရိုးမဘဏ်က လူကြီးမင်းတို့ကို ကူညီဖို့ အသင့်ရှိနေပါတယ်။ ဒီလို အခက်အခဲကာလကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ ရိုးမဘဏ်က ချေးငွေအရင်းပြန်ဆပ်ဖို့ ဆိုင်းငံ့ကာလကို ၆ လအထိ ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ ချေးငွေပြန်လည်ပေးဆပ်မှုကို အချိန်မှန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ချေးငွေအရင်းပြန်ဆပ်ရန်ဆိုင်းငံ့ကာလအတွက် အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့် www.deferral.yomabank.com လျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရိုးမဘဏ်မှ လက်ရှိချေးငွေရယူထားသူ (လက်ရှိချေးငွေယူထားပြီး ချေးငွေပြန်ဆပ်ရန် ပျက်ကွက်ထားခြင်းမရှိသူ) တွေ လျှာက်ထားနိုင်ပါတယ်။
၄။ ဘယ်လိုလျှောက်ထားရမှာလဲ။ ဘယ်လောက်ကြာကြာ ချေးငွေပြန်ဆပ်ခြင်းကို ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်ပါသလဲ။
လူကြီးမင်းချေးငွေရယူထားတဲ့ ရိုးမဘဏ်ခွဲကို ဆက်သွယ်ပြီး ချေးငွေပြန်ဆပ်မှု ဆိုင်းငံ့ပေးဖို့ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ရိုးမဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေ လူကြီးမင်းကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံး ၆ လအထိ ချေးငွေပြန်ဆပ်ခြင်းကို ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဆိုင်းငံ့ကာလကို ရိုးမဘဏ်မှ ဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၅။ ဒီချေးငွေဆိုင်းငံ့အစီအစဥ် ကို ဘယ်နှလကြာ လျှောက်ထားလို့ရပါသလဲ။
အများဆုံး ၆ လအထိ ဆိုင်းငံ့ပေးထားနိုင်ပါတယ်။
၆။ ဘယ်လိုချေးငွေအမျိုးအစားတွေ အကျုံးဝင်ပါသလဲ။
SMART Credit/ SMART Credit Business ချေးငွေ
၇။ ချေးငွေဆိုင်းငံအစီအစဥ်မှာ ချေးငွေအရင်းသီးသန့် ဆိုင်းငံ့တဲ့ ချေးငွေအမျိုးအစား၊ ချေးငွေအရင်းနဲ့ အတိုး နှစ်ခုစလုံးဆိုင်းငံ့နိုင်တဲ့ ချေးငွေအမျိုးအစားတွေ ခွဲခြားထားပါသလား။
ချေးငွေအရင်းသီးသန့် ဆိုင်းငံ့နိုင်တဲ့ ‌ချေးငွေအမျိုးအစားတွေကတော့
SMART Credit/ SMART Credit Business ချေးငွေ၊
အငှားဝယ်ယူစနစ်ချေးငွေ (Upfront) တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ချေးငွေအရင်းနဲ့ အတိုး နှစ်ခုစလုံးဆိုင်းငံ့နိုင်တဲ့ ချေးငွေအမျိုးအစားတွေကတော့
၈။ ရိုးမဘဏ်မှ ချေးငွေတစ်ခုထက် ပိုယူထားပါတယ်။ အဲဒီလိုအခြေအနေဆိုရင်ကော ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲ။
ချေးငွေတစ်ခုချင်းစီအတွက် ဆိုင်းငံ့လျှောက်လွှာတစ်ခုစီ တင်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၉။ ချေးငွေပြန်ဆပ်ခြင်းကို ဆိုင်းငံ့ဖို့လျှောက်ထားတဲ့အခါ ဝန်ဆောင်ခပေးရမှာလား။
၁၀။ အခု ချေးငွေပြန်လည်ပေးဆပ်မှု ဆိုင်းငံ့ခြင်းအစီအစဥ်ကို အသစ်အတည်ပြုပေးလိုက်တဲ့ သို့မဟုတ် အသစ်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ ချေးငွေရယူထားသူတွေပါ လျှောက်ထားနိုင်ပါသလား။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့အထိ ပြန်လည်ပေးဆပ်ဖို့ ကျန်ရှိနေတဲ့ အထက်ဖော်ပြပါ ချေးငွေအားလုံး အကျုံးဝင်ပါတယ်။
၁၁။ အခု ဆိုင်းငံ့အစီအစဥ်ဟာ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်း SMART Credit နှင့် SMART Credit Business လျှောက်ထားသူတွေအတွက်ရော အကျုုံးဝင်ပါသလား။
ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့နောက်ပိုင်း SMART Credit နဲ့ SMART Credit business အသစ်လျှောက်ထားသူတွေဟာ ယခုဆိုင်းငံ့အစီအစဉ်တွင် အကျုံးမဝင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ customers တွေ ပိုမိုအဆင်ပြေစေဖို့အတွက် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှစတင်ပြီး ချေးငွေအတိုးနှုန်း ၁၄.၅ p.a. နှင့်အတူ ဝန်ဆောင်ခလည်းပေးသွင်းစရာမလိုဘဲ လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
၁၂။ ဆိုင်းငံ့လျှောက်လွှာအားလုံးကို ဘဏ်ဘက်မှအတည်ပြုလက်ခံပေးသွားမှာပါလား။
ဆိုင်းငံ့အစီအစဉ်ဟာ အခုလိုအချိန်အခါမှာ ငွေပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် အခက်အခဲရှိသူတွေကိုသာ ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် ဆိုင်းငံ့လျှောက်လွှာတိုင်းကို ဘဏ်ဘက်မှ အတည်ပြုလက်ခံပေးမည်မဟုတ်ပါ။
၁၃။ လျှောက်ထားမှုကို အတည်ပြုပေးဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာပါသလဲ။
ပြီးပြည့်စုံသည့် ဆိုင်းငံ့လျှောက်လွှာတစ်ခု ရရှိပြီးပါက ရုံးဖွင့်ရက် ၅ ရက်အတွင်း ဆိုင်းငံ့ အတည်ပြု/မပြု ကို အကြောင်းကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၄။ လျှောက်ထားမှုအောင်မြင်ကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင်ပါသလဲ။
လျှောက်ထားမှု အောင်မြင်ကြောင်းကို ချေးငွေဆိုင်းငံ့လျှောက်ထားစဉ်ထည့်သွင်းထားသည့် ဖုန်းနံပါတ်သို့ SMS ပေးပို့ပြီး အကြောင်းကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၅။ နောက်တစ်ရက်နှစ်ရက်ဆို လစဥ်ပုံမှန်ပေးဆပ်ရမည့် ငွေကို ပေးရတော့မှာပါ။ အခု လျှောက်ထားလို့်ရပါသေးသလား။
ဘဏ်အနေဖြင့် ချေးငွေဆိုင်းငံ့အစီအစဉ်အတည်ပြုနိုင်ဖို့ ရုံးဖွင့်ရက် ၅ ရက်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာဆိုရင်တော့ လူကြီးမင်းအနေနဲ့ ဒီလ အတွက်ပေးဆပ်ရမည့်ငွေကို ပေးသွင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုပါတယ်။
၁၆။ ဆိုင်းငံ့အစီအစဥ် လျှောက်ထားပြီး ရုံးဖွင့်ရက် ၅ ရက်‌ ကျော်ကြာတဲ့အထိ လျှောက်ထားမှု အောင်မြင် မအောင်မြင် မကြားရသေးပါ။ ဘယ်လိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရပါမလဲ။
အတည်ပြုပြီးတဲ့အခါ ချေးငွေဆိုင်းငံ့ဖို့ လျှောက်ထားချိန်က ထည့်သွင်းထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်သို့ SMS ပေးပို့ပြီး အကြောင်းကြားပေးပါတယ်။ လျှောက်လွှာတင်သွင်းစဉ် လိုအပ်ချက်ရှိတာကြောင့် ဆိုင်းငံ့လျှောက်ထားမှု မအောင်မြင်တာမျိုးဆိုရင် ဘဏ်ဘက်မှာ ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားပေးသွားမှာပါ။ ၅ ရက်ကျော်ကြာ မည့်သည့် SMS မှ လက်ခံမရရှိခြင်း၊ ဘဏ်ဘက်မှ ဖုန်းဆက်လာခြင်းမရှိမှသာ ရိုးမဘဏ် Call center 9662 (or) 097 9662 9662 ကိုဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းပေးပါ။
၁၇။ COVID-19 ကြောင့် ငွေရေးကြေးရေးထိခိုက်မှုရှိထားတယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားပြဖို့လိုပါသလား။
အွန်လိုင်းမှဖြစ်ဖြစ်၊ ဘဏ်ခွဲမှ ဖြစ်ဖြစ် လျှောက်လွှာတင်သွင်းတဲ့အခါ ဆိုင်းငံ့လျှောက်ထားမှု အတည်ပြုနိုင်ဖို့ လိုအပ်တာတွေကို ထည့်သွင်း မေးမြန်းထားပါတယ်။ Customer ဘက်မှာ မပျက်မကွက် ဖြည့်သွင်းပေးဖို့သာ အကူအညီတောင်းလိုပါတယ်။
၁၈။ ချေးငွေပြန်ဆပ်မှုဆိုင်းငံ့ကာလပြီးသွားတဲ့အခါ ချေးငွေပြန်လည်ပေးဆပ်ရာမှာ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ။
အများဆုံး ၆ လအထိ ရယူနိုင်တဲ့ ဆိုင်းငံ့ကာလ ဟာ မူလ ချေးငွေရယူတဲ့သက်တမ်းမှာ ထပ်ပေါင်းမှာဖြစ်ပြီး ဆိုင်းငံ့ကာလပြီးတဲ့အခါ ချေးငွေအရင်းနဲ့ အတိုးကို ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အတိုးကိုပါ ဆိုင်းငံ့ထားတဲ့ ပုံစံမျိုးအတွက်ဆိုရင်တော့ ယင်းအတိုးဟာ ဆိုင်းငံ့ကာလအတွင်းမှာ အရင်းထဲကို ထပ်မံပေါင်းထည့်ထားခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်းငံ့ကာလပြီးရင် ဖြစ်လာမယ့် အတိုးအသစ်ဟာ ဆိုင်းငံ့ထားချိန် အရင်း နှင့်တကွ အတိုးပေါ်ကိုပါ ထည့်တွက်သွားတာမျိုးပါ။ ဒီလိုမျိုး ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုပုံစံမျိုးက customers တွေအတွက် ပိုမိုကုန်ကျစေမှာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် ဆိုင်းငံ့ရမယ်ဆိုရင်တောင် အတိုးပေါ်အတိုး မတက်သွားတဲ့ အရင်းကိုပဲ ဆိုင်းငံ့ဖို့ အကြံပေးလိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း မတတ်သာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့ အတိုးကော အရင်းပါ ဆိုင်းငံ့ထားပေးဖို့ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ချေးငွေဆိုင်းငံ့ကာလအပြီးမှာတော့ ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက်ပြီး ချေးငွေပြန်လည်ပေးဆပ်ရပါမယ်။
1. What is this Loan Deferral / Principal Pause Program?
It isatemporary deferment of principal and/or interest foralimited and fixed period of time. Once approved customers with loans that meet the criteria do not need to make principal and / or interest repayments for the agreed period. No late payment charges, will be charged during the agreed period.
When interest is paused it is added to the principal loan amount to be repaid. Interest is then calculated on principal plus the deferred interest (interest on interest). This is an expensive form of financing. It is far better for customers to continue to make interest payments so that they do not increase their borrowing costs over the remaining term of the loan. However, there will be circumstances where customers have little or no cashflow and the only option is to compound their interest.
2. Why are we offeringaLoan Deferral Program?
We understand that many of our customers are facing cashflow difficulties due to the Covid-19 crisis. We are here to help and we are committed to supporting our customers through this difficult time. This program is one of the ways we are supporting our customers.
If you regularly make repayments on time and you shall be able to apply for the principal pause program through www.deferral.yomabank.com.
If you haveaoutstanding Loan with Yoma Bank, the account must be current/no delinquency, you can apply.
You may apply by speaking to your Relationship Manager, the staff at your local Yoma branch or enquire by calling our Call Centre.
For those who want to make deferment on current installments, they have to make the request5working days in advance before due date. (Customers with overdue repayment are not eligible for this deferment program. However, they can pay back all the overdue amount and apply for the program.
5. how long can you defer your loan?
6. What type of Loans are eligible for this deferral program?
SMART Credit/SMART Credit Business loan
7. Are all the eligible loans can be deferred for both principal and interest?
No. Not all the loans can be deferred for both principal and interest.
Please be advised that when interest is paused,it accrues to the principal amount deferred. Interest on Interest will be charged during the deferment period. It is better for customers to continue to make interest payments so that they do not increase their borrowing costs over the remaining term of the loan.
Type of loans for principal-only deferment
1) SME loan
3) SMART Credit/SMART Credit Business loan
4) Agri loan
5) Hire purchase (Upfront)
Type of loans that both principal and interest can be deferred
1) SME loans
3) Hire purchase (EMI)
8. I have more than one loan with Yoma Bank on specific loan type, what do I do?
You need to submit one request for each loan
9. Are there any fees for the application?
No fee will be charged for this request.
10. Does this deferment programme applicable to newly approved/disbursed loans?
11. Is this applicable for new SMART Credit/SMART Credit business loans after 1st April?
No, the new loans are not eligible for the program. However, starting from 1st of April, all new smart credit and smart credit business loans from 1st of April will be priced at 14.5% interest with no membership fee.
12. Are all the requests approved by the bank?
No. It is based on the individual basics as it intends to fulfil the need of the customer with financial difficulties during this hard time.
13. How long does it take for approval?
From the time your completed application form is received, Customers will be informed within5working days after request is received whether it is approved or not.
14. How do I know if my request has been granted?
We will notify you through SMS to the mobile number you provided on your loan applications.
15. My loan payment is due inafew days. Can I still apply?
You will need to factor in5working days for us to process your application and decide whether you are eligible. In this instance your payment due inafew days times will need to be paid.
16. How can we follow up or contact if we can’t get any confirmation from related branch/ showroom although I submitted my request more than5working days?
We sendaSMS to your phone for your submission approval. Yoma bank strongly believe that the new portal will not take more than5working days to process your request, we want to advice you to go check your phone SMS messages and or call our call center to know about the request status.
17. Will you require proof that your finances have been impacted by Covid-19?
Yes, our application form hasanumber of questions you must answer for your request to be considered
18. What happens post an interest pause period?
The term of the pause period is added to the end of your original loan term. For example,aPrincipal Pause of3months will extend the term of the loan from 31 December 2020 to 31 March 2021.
When interest is paused it is added to the principal loan amount to be repaid. Interest is then calculated on principal plus the deferred interest (interest on interest). This is an expensive form of financing. It is far better for customers to continue to make interest payments so that they do not increase their borrowing costs over the remaining term of the loan.
'; // } }); //$('#myModal').modal('show');